Home Wararka Rooble, Guuleed & Cabdi Qeybdiid oo ku fashilmay Doorashadii Guddiga FIET
[XOG] Rooble, Guuleed & Cabdi Qeybdiid oo ku fashilmay Doorashadii Guddiga FIET
Doorashadii ka dhacay teendhada Afisyooni, ee maanta lagu doortay guddoonka guddiga doorashooyinka heer federaal, ayaa muujisay laba arrin oo mid ay aheyd lama filaan, midda kalena la qiyaasayey.
Arrinta koowaad ee doorashada kasoo shaac baxday ayaa aheyd sida uu qorsheynayay RW Xilgaarsiinta Rooble oo uu Cabdi Qeybdiid ku cadaadinayay in Guddoomiyaha Guddiga loo magacaabo Liibaan Shuluq oo ka taageere u ah Madaxweynihii iska casilay Maamulka Galmudug oo haddana ka mid ah midowga Musharaxiinta Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Arrinta kale ayaa aheyd in xubnaha Guddiga aay ka biyo diideen codsiyo si dadban uu u soo gaarsiiyay Rooble taasoo uu ugu ololeynayay in Liibaan Shuluq ay taageeraan “Waxaa Cabdikariin Xuseen Guuleed ii ballan qaaday $10 KUN haddii aan codkeyga siiyo Liibaan ayuu yiri mid ka mid ah xubnihii doortay Guddoomiyaha kaasoo ka cudur daartay in aan magaciisa sheegno. Wuxuu intaa ku daray in Guuleed uu $5000 Doollar uu qaar ka mid ah guddiga uu hor marin u siiyay halka $5000 uu ballan qaaday haddii Liibaan noqdo Guddoomiyaha ayuu yiri.
Midowga Musharaxiinta ayaa la sheegayaa inay ku kala qeybsanaayeen doorashada oo aanay hal musharax isku wada raacsaneyn, marka laga reebo in Liibaam Maxamed Xasan (Liibaan Shuluq) taageero ka helayay Rooble, Cabdi Qeydiid & Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Doorashada Guddoonka Guddiga FEIT oo maanta dhacday ayaa waxay dhabar jab ku noqotay hanka Rooble iyo Beesha Habar Gadir, taasoo aay adkaan doonto in murashaxiinta beesha Habar Gidir aay kasoo gudbaan wareegga koowaad Doorashada lagu wado in aay dalka ka dhacdo 10ka bisha Oktoober ee sanadkan 2021.
Previous article[AKHRISO] TPLF oo shuruudo adag ku xiray xabad-joojinta uu Abiy Ahmed dalbaday
Next articleDowlada Federaalka oo si isku mid ah ula hadashay Jan. Xuud iyo Maamulka Hirshabelle
Maamulka Tigreeyga oo qeyla dhaan kamuujiyay dagaalka aay kula jiraan Dowladda...
Ciidamada amaanka oo Howlgal ka sameeyay Xafado katirsan Muqdisho